Harowo.com | HarawoNews – Somalia Information & Analysis – Siilaanyo oo Jilbaha haysta Ismaciil Cumar Geelle iyo Maxamed X. Ibraahim Cigaal oo Ismaaciil Qadaadka Qabtay Albaakana ka saaray
Siilaanyo oo Jilbaha haysta Ismaciil Cumar Geelle iyo Maxamed X. Ibraahim Cigaal oo Ismaaciil Qadaadka Qabtay Albaakana ka saaray
Wasiirkii arrimaha gudaha somaliland wuxuu dhammeeyay hawl uu todobaad u joogay Zeilac. Intaa ka dib waxa laga daba diray wafti kale waxana lagu amray wasiirka iyo wafdigiisa inay go’aankooda u soo sheegaan Dawladda Jabuuti xadkana ka tallaabaan.
Maalintii Salaasada wafdigii Somaliland Jabuti inay galaan waa loo diiday. Haddana habeenimadii ayaa Siilaanyo fasax u waydiiyay Jabuuti in wasiirka loo ogolaado Jabuti oo madaxweynaha iyo Ugaaska Ciise ugu tagaan.
Sidaa waxa keenay odayadii Ciise ee shirka loogu qabtay Zeilac oo sheegay inay arrintoodu Jabuti ka go’do. Dadkii degenaa waddanka, yaab bay ku noqotay hab dhaqanka dawladda Siilaanyo, Sababtoo ah:
– Waftiga hore ee talada dhammeeyay, maxaa mid kale loogu soo daray
– Somaliland weligeedna ma hoos iman Jabuti
– Cidda ay talo jabuti kaga xidhantahay, Jabuti ha tageen
– Wasiirada waddanka inay xadka ka tallaaban oo weliba loo diido waa ceeb wayn
– Ninkii wax naga xidhanyihiin annaga ha noo yimaado
– Calanka Somaliland weligii ma hoos iman kan waddanka yar ee Jabuti
Waa nasiib darro inuu maanta Siilaanyo, calanka Somaliland sidaa u dhigay, wasiiradiisiina sidaa loo bahdilo oo sidii tuugta xadka lagu horjoogsado. Weli maamul dawladeed oo sidaa loo bahdilo maynaan arag. Halkaa waxa ka muuqata inuu waddankan maamulkiisii faraha ka baxay. wasiirku markuu amarkiisa bixiyay, sharciga uun buu raaci lahaa, inuu meeraystuna uma baahnayn.
Damacan iyo aragtidan gaaban ee Ismaciil maaha mid cusub. Dhammaadkii sannadkii 2002, Geesigii waynaa, Ilaahay ha u naxariisto, Mohamed Haji Ibrahim Cigaal, Ismaciil Cumar Ghelle ayaa waydiistay in qaxtooti ciise ah loo soo dejiyo Zeilac iyo Xariirad.
Cigal, Alla ha naxariistee, wuxuu ugu jawaabay, “ War waan is naqaan oo Ciise dhulkan ka maqani ma jiraane, dadkiina dhulka ay degenyihiin u daaya”, intaa wuxuu u raaciyay oo ku yidhi, “ Dadkii Zeilac caanaha gadhoodhka ah iyo canbaaburka ku cuni jiray waa kuwa qaxootiga ku jooga xeryaha Dharwanaaje iyo Aw Barre”. Hadalkaasi wuxuu ahaa mid la wad ogaa oo BBC london ka baxay. Markay murankii sii wadeen , mar saddexaad cigaa wuxuu ku yidhi, “ walaalayaal reer Jabuutow, ha noqonnina kaneecadii maroodiga ku tidhi, waan kaa dul kacayaa ee is xajji .”
Sidaas buu Cigaal u qabtay qadaadka Ismaciil cumar Ghelle, albaabkana uga saaray. Rayale oon siyaasi ruug caddaadi ahayn buu markiiba hoos orday Ismaciil, wuxuu rabayna wuu ka samaystay….Gobol, badhasaab, mayor…aan doorasho ku iman. Maantana dhalanteedkii jeebka Rayale ka soo baxay buu rabaa inuu dadka run uga dhigo. Ismaciil waa kii, aqli xumo calanka jabuti ka taagay Zeila iyo Lughaya 1991.
Waxan u digayaa waxgaradka Beelaha deggen waddankan; lama hadlayo siilaanyo iyo maamulkiisa. Waayo? Siilaanyo waa ninkaa sariirta saaran ee lagu dul shaqaysanayo. Talona faraha uguma jirto waanad ogtihiin.
Ismaciil Cumar Ghelle waa nin naf la caari ah oo waddankiisii yaraa ka talin kari waayay. Dadka yar ee Jabuti ku nool, biyo iyo laydh buu siin kari waayay. Dugsiyada ardaydu kulayl ma fadhi karaan. Caafimaad iyo dhaqaale kale iska illow. Xoolihii waddanka isagaaa meel dhigtay.
Indhaha dadkiisa uu dhacay buu meel kale ku jeedinayaa. Taasina maaha inay noqoto,nabadda iyo nolosha Somaliland. Intaa waxa u dheer, Ismaciil weligiiba meel uu somaliland ka dumiyo ayuu raadin jiray. Maanta wuxuu arkaa in taladii somaliland luntay oo waakaa Ismacil, Wasiiradii waddanka ugu waawaynaa farta ugu yeedhaya. Zeilacna maaha in Jabuuti laga xukumo, mana aha degmo ka duwan degmooyinka kale ee waddankan.
Waqti yar baan haysannaa in waddankan la badbaadiyaa. Hore waan u soo aragnay inaan ninna xoog lagu xukumi karin,dhulkiisana laga qaadi karin. Runta ha loo kaco hagardaamada iyo beentana hala diido, sidaas baan dhammaanteen dani innoogu jirtaa.
WAFTI XUKUUMADDA SOOMAALILAND AH OO DAWLADDA JABUUTI KU QANCINAYA SIDAY U AQBALI LAHAYD MAAMULKA SAYLAC Ururka ARDAA oo shirweynahoodii kasoo saaray labo qodob qaddiyada Saylacna taageeray